ပဲပုပ်တစ်သျှူးပရိုတင်း၊ Konjac သန့်စင်သောအမှုန့်၊ ပရိုတိန်းအမှုန့်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီတို့ကိုအဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြု၍ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလက္ခဏာများသည်တိရိစ္ဆာန်အသားများအစားထိုးခြင်းနှင့်သက်သတ်လွတ်အသားနှင့်ဝက်ပေါင်ခြောက်အသားထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာကိုစမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
ပဲပုပ်ပရိုတင်း ၁၀၊ ရေခဲ ၂၄၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ ၇.၅၊ ၁.၁ Konjac အမှုန့်၊ ပရိုတိန်းအမှုန့် ၃၊ ပြုပြင်ထားသောဓာတ် ၁.၈၊ စားပွဲတင်ဆား ၀.၉၊ သကြားဖြူ 0.4၊ monosodium glutamate 0.14, I + G 0.1၊ ပဲငံပြာရည်အရောင် ၀.၀၉၊ TBHQ ၀.၀၃ ။
ပဲပုပ်တစ်သျှူးပရိုတိန်း→ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်ရေဖြည့်တင်း→ရေဆေး→ silken →အေးခဲသည့်အရံသို့ထည့်သည်
ရေခဲရေထဲတွင်အရန်ပစ္စည်းများထည့်ပြီး→ရောနှောပြီး emulsify →ပဲပုပ်တစ်သျှူးပရိုတိန်းပိုးကိုပေါင်းထည့်ပါ။ မြန်နှုန်းမြင့်နှိုးဆော်ခြင်း→ကျောက်ကပ်→ချက်ပြုတ်ခြင်း (ပိုးသတ်ခြင်း) →ရှာဖွေခြင်း→အချောထုတ်ကုန်→သိုလှောင်ခြင်း
၁။ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း - ပဲပုပ်တစ်သျှူးပရိုတင်းကိုရေကိုစုပ်ယူပြီးစိုစွတ်စေပြီးပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ရန်ရေထည့်ပါ။ ဤအချိန်ကာလအတွင်းလက်ကိုင်လှုံ့ဆော်မှုသည်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေနိုင်သည်။
၂။ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း - ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ပြီးနောက်ပဲပုပ်တစ်သျှူးပရိုတင်းသည်အထူးရေဓာတ်ခန်းခြောက်စက်ရုံတွင်ရေဓါတ်ခန်းခြောက်။ သင့်လျော်သောစည်းနှောင်ထားသောရေကိုသာသိုလှောင်ထားနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောရေပါဝင်မှုသည် ၂၀% မှ ၂၃% ကြားတွင်ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ပြီးနောက်ပဲပိစပ်တစ်ရှူးပရိုတိန်း၏အပူချိန်သည် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်မကျော်လွန်ပါ။ ၎င်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ရာတွင်အသုံးပြုသောရေ၏အပူချိန်ကဆုံးဖြတ်သည်။
(၃) ပိုးထိုးခြင်း - ရေခန်းခြောက်ထားသောပဲပိစပ်တစ်ရှူးပရိုတိန်းအပိုင်းအစများသည်သက်သတ်လွတ်အသားလှည့်စက်ဖြင့်ဖိုင်ဘာအမျှင်များထဲသို့လိမ်သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ပရိုတိန်း၏အနံ့နှင့်ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန်အခန်းအပူချိန်ကိုအချိန်မီအအေးခံရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အဆုံးထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။
4. ရောစပ်ခြင်းရေခဲရေတွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီနှင့်အတူ konjac အမှုန့်၊ emulsifier စသည့်အရန်ပစ္စည်းများကိုရောစပ်။ အလယ်အလတ်အဆင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူသုတ်လိမ်းပါ။ အညီအမျှ emulsifying ပြီးနောက်, ပဲပုပ်တစ်ရှူးပရိုတိန်းပိုးထား 15 မိနစ်နှင့် 20 မိနစ်အဘို့အမြန်နှုန်းမှာနှိုးဆော်။
5. Enema: သင့်တော်သောအဖုံးကိုရွေးချယ်ပြီး enema စက်ပေါ်တွင်ထားပါ။ သတ်မှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီရောထွေးသော viscous fillings များကိုမွှေပါ။
၆။ ချက်ပြုတ်ခြင်း (ပိုးသတ်ခြင်း) ဝက်ပေါင်ခြောက်ကို ၉၈ at မှာ ၂၅ မိနစ်ခန့်ချက်ပြုတ်ပါ။ အအေးသိုလှောင်ရန်သင့်တော်သည်။ ၎င်းကို ၁၃၅ ံအပူချိန် ၁၀ မိနစ်ခန့်ပိုးကင်းစေပြီးအခန်းအပူချိန်တွင်သိုလှောင်နိုင်သည်။ အထက်ပါထုတ်ကုန်များ၏သတ်မှတ်ချက်များမှာ ၄၅ ဂရမ်မှ ၅၀ ဂရမ် / ချွတ်သည်။ ထုတ်ကုန်အလေးချိန်တိုးလာသည်၊ ချက်ပြုတ်သည့်အချိန်ကိုတိုးချဲ့သင့်သည်။
၇။ စစ်ဆေးခြင်း - တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုစစ်ဆေးခြင်းသည်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်နှင့်သူတို့၏သက်တမ်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအလုပ်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စမ်းသပ်ရမည့်ပစ္စည်းများတွင်အစိုဓာတ်နှင့်ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်များပါ ၀ င်သည်။ ထုတ်ကုန်ကိုလိုနီအရေအတွက် 30 / g အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်သင့်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောဘက်တီးရီးယားများကိုမတွေ့ရှိရပါ။
post အချိန်: နိုဝင်ဘာ -28-2020